Raktabeej - Krishna Abiral | Thuprai
Rs 315 Rs 350
कसैकसैले त कस्तोसम्म लेख्न सक्छन् ! पढ्नसमेत डर लाग्यो । धन्न भाग्यमानी ! उपन्यासभित्र कतै मेरो नाम छैन । कृष्ण अविरलको 'रक्तबीज' साहसको पराकाष्ठै रै’छ । किन यतिविधि निडर हुनु नि ! 'रक्तकुण्ड’को हजुरबाउ उपन्यास । बधाई, शुभकामना अनि ईष्र्या कृष्णलाई । - डा. रामेश कोइराला, आख्यानकार
मुटु नभएको मान्छे’ अर्थात् कृष्ण अविरलको 'रक्तकुण्ड' पढ्दा त्यो बेला मन सिरिङ्ग्ग भएको थियो । यसपटक 'रक्तबीज' पढ्दा उनको अनुसन्धान क्षमता र लेखनशैली निकै माझिएको महसुस भयो । राजदरबारसँग सम्बन्धित कतिपय घटनामा अनुमानै गर्न नसकिने रहस्योद्घाटन अनि आङ्गै सिरिङ्ग्ग पार्ने सनसनीपूर्ण खुराकले उपन्यासलाई पठनीय बनाएको छ । मलाई विश्वास छ, 'रक्तबीज'ले 'रक्तकुण्ड'को रेकर्ड तोड्नेछ । - डा. रविन्द्र समीर, आख्यानकार
'रक्तबीज'मा राजदरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित हामीले सुनेका कतिपय घटनालाई उपन्यासमा निकै रोचकशैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । पढ्दै गर्दा उपन्यास नभएर दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित सत्यतथ्यहरुको सँगालो हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । कतिपय घटना र पात्रहरुका बारेमा उल्लेख गरिएका कुरा पत्याउनै मुस्किल पर्ने खालका छन् ।
रक्तबीज पाठकहरुका बीचमा निकै चर्चित उपन्यास हुने मैले अनुमान गरेँ । - जीवा लामिछाने, पूर्वअध्यक्ष, एनआरएन
'रक्तकुण्ड' खोरमा थुनिएको बाघका बारेमा थियो । यसपटक 'रक्तबीज'मा दाह्रा नङ्ग्रा फुकालिएको बाघका विगतका बेवकुफीसँगै हाम्रा सडकमा खुलेआम गर्जिरहेको तिरङ्गे सिंहका हरकतको पोल खोलेको छु । गणतन्त्रप्रेमी नागरिक हुनुको नाता कर्तव्य निभाउने प्रयास हो यो । थाहा। छैन 'रक्तबीज' बजारमा आएपछि सिंहका अनुचरहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? तर मानसिक रूपले म जुनसुकै प्रतिक्रिया व्यहोर्न तयार छु । आखिर दुनियाँमा अजम्बरी को छ र !
बाँचिरहेछु भने अर्को कृतिमा भेटौंला ।
अविरल अनुसन्धानमूलक आख्यान लेख्न मन पराउँछन् । 'रक्तबीज'मा उनले राजदरबार हत्याकाण्डको खास चूरो र भारतीय हस्तक्षेपका मिहीन कुरा केलाएका छन् । जनयुद्धका बारेमा आममानिसले अनुमान गर्न नसक्ने रहस्योद्घाटन गरेका छन्, त्यो पनि सप्रमाण | उनको अनुसन्धान शैली र लेखन निकै माझिएको छ ।
'रक्तबीज' यस्तो आख्यान हो, जसले भावीपुस्ताका लागि विगत तीन दशकयताको सत्यतथ्य सुरक्षित गर्ने काम गरेको छ । एकप्रकार गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि साहित्यतर्फको यो कोसेढुङगा हो ।